EBEE KA Ị NWERE IKE IBUDATA WINDOWS 8.1 NJIKỌ IKIKE (ỤBỌCHỊ 90) - WINDOWS - 2019
Site na otu n'ime ndị na-agụ ya, ajụjụ ahụ bịara na post banyere ebe na otu esi budata mbụ Windows 8.1 Foto ụlọ ọrụ maka ihe nlele na igwe arụmọrụ. Ejikwa ya kpọmkwem ebe a pụrụ ịchọta ya na weebụsaịtị Microsoft, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ime nke a n'onwe ha. Hụkwa Wụnye Windows 8.1.
Imelite 2015: na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị Os os ọzọ (ọ bụghị ikpe ikpe), hụ ntụziaka Olee otú ibudata mbido mbụ nke Windows 8.1. Usoro a na - enye gị ohere ịnweta nhọrọ niile (ma e wezụga maka Enterprise) nke Windows 8.1 na ụdị ihe osise ndị na - achịkwa ma jiri ha wụnye usoro ma ọ bụ iji weghachi ya.
Chọọ na Microsoft.com na-enye naanị ohere ịzụta ma ọ bụ melite sistemụ arụmọrụ. Iji budata ngọngọ ụbọchị 90 nke Windows 8.1 Enterprise, gaa na Nyocha Software TechNet. N'otu oge ahụ, e nwere ọtụtụ nuances mgbe nbudata.
Download Windows 8.1 si technet.microsoft.com
Iji budata ihe mbido mbụ nke ụdị nyocha nke Windows 8.1, soro njikọ //technet.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/hh699156.aspx (anaghị emechi isiokwu a n'ihi na enwere ihe abụọ iji budata Ọ bara uru ịṅa ntị).
A ga-akpali gị ịhọrọ nsụgharị: x64 ma ọ bụ x86, wee malite ibudata site na ịpị nnukwu bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ozugbo nke a gasịrị, ị ga-abanye na akaụntụ Live ID gị (mepụta ya ma ọ bụrụ na ọ bụghịrịrị ebe ahụ, ọ bụ n'efu), wee tinye data nkeonwe gị ma gosipụta ihe mere i ji na-ebudata Windows 8.1 (dịka ọmụmaatụ, ịtụle usoro ahụ). Site n'ụzọ, asụsụ Russian adịghị na ndepụta nke asụsụ, mana ị nwere ike ịwụnye ya mgbe ọ bụla: Otu esi budata Russian maka Windows 8.1.
Na nzọụkwụ na-esonụ, windo ga-apụta na-akpali gị ịwụnye usoro Akụ NetSession Interface. Achọpụtara m na ọnwa ole na ole gara aga enyeghị m ohere ibudata ma wụnye ihe ọ bụla na-enweghị isi, na anaghị m amasị ya.
Ya mere, n'agbanyeghị nkwenye na ọ dị mkpa iji wụnye usoro ihe omume ahụ, m na-edegharị site na ederede na windo ruo na njedebe ma pịa njikọ "Enweghị ike imezue nwụnye" ahụ, - Ok. Ma mgbe nke a gasịrị, ị ga-ahụ njikọ kpọmkwem maka ibudata ISO na usoro ikpe nke Windows 8.1 Corporate.